musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Champagne yeMunhu wese ndiyo yako COVID Stimulus
Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau • Waini & Midzimu
Muvambi weNew York Champagne Svondo ,, Blaine Ashley, akabvunzurudzwa naDr. Elinor Garely, uko hurukuro yakanangisa kuti sei Champagne iri izvo chaizvo izvo nyika inoda izvozvi.
Ko kuvhura bhodhoro reChampagne kunogona kutibatsira here kupfuura nemumugwagwa wakaomarara, wakaremara, wakaipa, usina kuenzana unonzi COVID-19?
Vazhinji vatengi vari kuiwana ichifadza gore rese pamatafura emhuri pamwe nekudya kwemanheru ehuku yakakangwa uye french fries.
Kupera kwa2020 kwakaona Washington, DC, vatengesi vachitengesa mamwe mashampeni mushure mekukunda kweBiden / Harris kupfuura mhemberero mbiri dzeEvha dzeGore Idzva dzakabatana.
Kutanga mukutanga kwegore ra2020, nyika sekuiziva kwedu, kuirarama, neruzivo uye kazhinji - kunyange kuida… yachinjwa. Iko kuchinjisa hakuna kupihwa neane tarenda mafashoni vagadziri, maartist, vaimbi, mashefu, kana vagadziri. Shanduko yakaitwa nevaimbove mapurezidhendi, vatungamiriri venyika, uye vatungamiriri vemakambani avo, kupfuura zvinotarisirwa, vakakwanisa kufuratira sainzi nekutenda kuti zvematongerwo enyika ZVINOTONGA.
Kufanana nevanozvimiririra uye vanamwari-vamwari, vadzvanyiriri vemakambani, uye vamwe vatungamiriri vakatsauswa pamberi pavo, nhoroondo inopa chiratidzo chetariro. Nepo izvo zvakapfuura zvekare uye zvenguva pfupi ramangwana zvichiratidzika kuva zvishoma, kuvhenekerwa kuchakunda… kana tichigona kurarama kwenguva yakakwana!
Saka - isu tinopfuura sei nenzira yakaoma, ine makumbo, ine mabhomba, isina kuenzana munzira iri pamberi? Isu tinovhura bhodhoro reChampagne uye tinotarisa pamabhuru nekutenda kuti vamwe vakazviita kuburikidza nehondo uye matenda, rusaruro uye ruvengo, uye isu takaomarara zvakakwana uye takashinga zvakakwana kuti tibudise kuburikidza neCOVID-19.
Pamberi pa2020, mashandiro eChampagne akawedzera nekutengesa kunze kwenyika kuUS kuri kukura nemabhodhoro anodarika mamirioni mashanu pakati pa5 na2015 (Comite Champagne) uye chikamu chemusika weChampagne chakawedzera ne2019 muzana kubvira 3.51 (Drizly).
Nehurombo, varimi vemazambiringa uye vagadziri vewaini muChampagne, France, pamwe nenyika dzese, zvakakanganiswa nenjodzi iyi. Kutanga muna Kubvumbi 2020, musika weChampagne wakadonha ne1 / 3, yakaenzana neinenge madhora mabhiriyoni maviri mumari uye akaenzana nemabhodhoro emamirioni zana eChampagne - asara mukuverenga ... asina kutengeswa.
Ino haisi nguva yekutanga kuti vatengi vafuratire Champagne. Muna 2009, pakanga paine kuderera kwe28 muzana mukutumirwa kunze kwenyika, uye panguva yeKuderera Kukuru, rinenge zana ramakore rapfuura, Champagne yakanga isiri chinwiwa chesarudzo. Mune mamwe mazwi, kuderera kwe2020 kwave nenjodzi inoshamisa asi hazvishamise.
Zvinetso Zvakatarisana neChampagne
Kushambadzira kune Mutoro
Dambudziko riripo kwete nekuda kwechigadzirwa asi asi nekutarisisa kwaro. Champagne inofananidzwa nemapoka evanhu vanofara, vachipemberera kutanga kwehupenyu (kuberekwa patsva), basa idzva (kana kukwidziridzwa), muchato kana chiitiko chegore, kuhwina rotari, kana kupedzisa nhangemutange. Zvese izvi zvaimboita zvakajairwa zviitiko zvino zvinopa akakwana nharaunda yekukurumidza uye isingaregi kupararira kweCOVID-19 uye, nekudaro, inoiswa pamusoro peNO GO rondedzero. MuSouth California, ingangoita 60 muzana yekutengeswa kweChampagne kwakabatana nemhemberero. Apo denda rakarova, kutengesa kwakaderera ne30 muzana. Munguva yekuvharwa kweEuropean, kutengesa kwemashampeni kwakaderera neinenge 75 muzana.
Champagne yaiwanzove chinwiwa chesarudzo kune vafambi vakagara muzvigaro zvekutanga- uye zvebhizimusi -kambani pane ndege. COVID-19 yabvisa yakanakisa, yekudyira-yakawanda kosi uye inodziya sevhisi yaimbove chiratidzo chevatakuri vakadai seSingapore Airlines Ltd. uye Cathy Pacific Airways Ltd.Iyo ndege yazvino yakanangana nezvekuchengetedza uye hutsanana, kupa kufukidza kumeso uye sanitizers emaoko kwete Champagne.
Gore rechitatu reKudziya Kwenyika
Dunhu reChampagne rakasangana nemazhizha matatu anodziya. Kudziya kwepasi kwashandura mamiriro ekunze, ichigadzira nguva nyowani nematambudziko evashandi veindasitiri yewaini. Kubva munaNdira kusvika Chikumi, tembiricha dzakapfuura avhareji yakanyorwa. Pakutanga kutumbuka uye mazambiringa akatsva kubva kuzuva panguva yaNyamavhuvhu zvakashandura chimiro chemazambiringa. Mazambiringa akatorwa zvakanyanyisa kutanga muna 3 (Nyamavhuvhu 2020) mudunhu reAube.
Zvinogona kunge zvichinyanya kukurumidza kuti uone kana 2020 richava gore remazambiringa, asi nyanzvi dzinoona kuti pane mukana wakakomba wekuti zvichave zvakanaka sezvo paine chiyero chakanakisa pakati pekunhuhwirira kwekukura, acidity, uye shuga.
Varimi vewaini yeChampagne uye vagadziri vakajairira kubata nekushomeka kwemamiriro ekunze, ivhu, uye zvipembenene zvinomhanyisa pamiti yemizambiringa, mashizha, uye mazambiringa; zvisinei, hutachiona hune huturu hunorwisa vashandi uye vanogadzira winini rave riri dambudziko kupfuura hunyanzvi hwavo. Dambudziko rehutano raida kutariswa kutsva pachigadzirwa chavo, kugadzirwa, kugoverwa, uye kudyiwa, kuchida kugadziriswazve kwezvinhu zvakajairika.
Champagne Komiti Mitemo
Iyi ndiyo Komiti yeChampagne, inomiririra vintner zviuru gumi nezvitatu mudunhu reChampagne yeFrance vachigadzira mitemo yevanogadzira waini. Nhanho yekutanga yaive yekuchengetedza vashandi uyezve kudzidzisa ipapo mukutevera maitiro ehutsanana. Nhanho inotevera yaive yekuisa miganho pahuwandu hwemazambiringa aigona kukohwewa nechinangwa chekutsigira mitengo. Chikamu chinosuruvarisa chenyaya ndechekuti huwandu hwakawanda hwemazambiringa hwakaparadzwa kana kutengeswa kuma distilleries pamitengo yakadzikiswa. Komiti yakaona kuti vintner vaizobvumidzwa kukohwa pamwe chete makirogiramu zviuru zvisere zvemazambiringa pahekita yemwaka, kana zvakaenzana nemabhodhoro mazana maviri nemakumi maviri emamiriyoni enharaunda yese inova zvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana pasi pemari inobvumidzwa muna16,000.
Rubatsiro kubva kuHurumende yeFrance
Champagne Dzimba dzine zvinyorwa uye zvimwe zviwanikwa zvemari; zvisinei, waini nenyika hazvisi mvura uye, nekudaro, hazviwanikwe kubhadhara vakweretesi. Vanogadzira winamu veChampagne vakwanisa kuwana pret garanti par l'Etat (PGE) mari yemubhadharo yakaderera yakavimbiswa chikwereti kwemwedzi mitatu yemubhadharo wa3 nemitemo yekubhadhara iri nyore kusvika muna 2019.
Pakutanga kwedenda, vakweretesi vakatanga kusaripa pakubhadhara uku kutengesa kuchishata. Iyo PGE yakagonesa kubhadhara chikwereti nenguva, pamwe nevashandi mihoro. Hurumende yakabhadharawo vashandi vane chinzvimbo chazove chakadzokororwa kuburikidza nechomage partiel (vashandi vanokanganiswa nekurasikirwa kwemubairo vanobhadharwa newaunoshandira) Kuburikidza nesystem, mushandi anoramba achiwana 85 muzana yemubhadharo wake kunyangwe asiri kushanda. Imwe rubatsiro rwehurumende - fonds de solidarite - inobatsira makambani kugara pamusoro pemvura. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, hurumende inopukuta mari yemagariro uye / kana mitero yenguva yakatarwa apo mari yadzikira zvakanyanya. Aya mapurogiramu akadzivirira nyaya dzekusabhadharwa uye anogona kunge achidzivirira kumisikidzwa kumisidzana.
Zvingave zvishoma pane hunyanzvi kupinda muchitoro chewaini kana kutaurirana nemushandi uye kungobvunza girazi reChampagne! Kungofanana nezvimwe zvigadzirwa zvepamusoro, iyo mhando yakakosha sechigadzirwa. Vatungamiriri vemashampeni eChampagne vanotanga neMoet, uye Moet Hennessy mamaki kumusoro kwechikwata cheChampagne sechikamu cheLVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) ine zvivakwa zvitanhatu zveChampagne zvinosanganisira Veuve Clicquot, Moet & Chandon, uye Dom Perigon. Moet & Chandon ndiyo imba hombe yeChampagne inotengesa mabhodhoro emamiriyoni e6 mu64.7 nemitengo inotangira pamadhora makumi mana nemaviri pahombodo. Ese maMoet Hennessy zvigadzirwa zvinopa mari yegore rose yemari yeLVMH ye2019 bhiriyoni euros, ichishandisa vanhu makumi maviri nevaviri.
Vranken-Pommery Monopole ndiro boka rechipiri rakakura reChampagne uye rine maratidziro mashanu eChampagne anosanganisira Vranken, Demoiselle, Charles Lafitte 183, Pommery, uye Heidsieck & Co inoburitsa mari inosvika mamirioni 218.8 euros. Iyo kambani inotarisira 2600 mahekita epasi (akakurisa muEurope) akapararira pamusoro peminda yemizambiringa mina muChampagne, Provence, Camargue, uye Douro.
Iyo Nicolas Feuillate Champagne House inogadzira mamirioni 211.9 euros mumari inoteverwa naLauren Perrier ane 206.2 mamirioni euros. Piper Heidsieck (Copagnie Champenoise PH-CS) inogadzira mari yegore rose yemamirioni 109.2 emamiriyoni. Iyo yekare Champagne House, Gosset, inoburitsa mari yegore rose yemamirioni 23.7 emamiriyoni (BoldData.com).
Sekureva kwaMichelle DeFeo, purezidhendi weLaurent-Perrier US, Champagne zhinji inotengwa kumhemberero dzezororo; zvisinei, vatengi vazhinji vari kuiwana ichifadza mugore rese. Nekuti Champagne pairi yakanyatsonaka nechikafu, yatanga kuoneka pamatafura emhuri pamwe nekudya kwemanheru yehuku yakakangwa uye maFrench mafry maererano naPhilippe Andre, mumiriri weUS kuChampagne Charles Heidsieck. Moet Imperial Brut ishamwari yakanaka kune sushi.
Kutengesa kweChampagne kwakaona kuwedzera muUSA pakupera kwa2020 zvichitevera sarudzo dzemutungamiri wenyika. Vatengesi muWashington, DC, vakatengesa mashampeni akawanda mushure mechiitiko ichi kupfuura mhemberero dzeEvha dzeGore Idzva dzakasangana pamwe chete sevavhoti vakapemberera kukunda kweBiden / Harris. Kunyangwe muBrooklyn, NY, kwaive neChampagne yaitenga spree, uye mutengesi wewaini weko akatsunga kuti yakatengesa waini inopenya mazana matanhatu muzana mushure mesarudzo kupfuura mavhiki apfuura uye akapedzisira atengesa zvese zvaakatsvaga.
Vatengesi vezvitoro zvewaini vari kudzidzisazve vashandi zvichibva pakutsvagirwa kweChampagne vachiona kuti chikonzero chepamusoro chekutengeswa kweChampagne panzvimbo yekutenga kurudziro yemutengesi; Naizvozvo, vashandi vekutengesa vanodzidziswa vachatarisa kurudziro yemabhodhoro emahombekombe eChampagne
Champagne yakagadzirirwa kudzosera mugove wemusika uye kutengesa mabhiriyoni emamiriyoni mazana matatu pakupera kwa300 kana 2021 panguva pfupi yapfuura.
Zvinodiwa Nenyika Zvino
Blaine Ashley, Muvambi, New York Champagne Svondo; Iyo Fizz ndeyeMukadzi
tinya kuti uterere podcast
Kutanga muna 2013, Blaine Ashley anga ari chikamu chakakosha cheChampagne indasitiri uye pachezvake ndiye ane chekuita nekuratidzira chigadzirwa kubudikidza nekugadzira, zviitiko zvine mbiri zvakasimudzira ruzivo rwekutengesa, midhiya, uye misika yevatengi kune ino inokosha chikamu chewaini. Muna 2018, Ashley akatanga Iyo Fizz ndeyeMukadzi, akateerana ezvirongwa uye zviitiko izvo pemberera vakadzi vachitungamira iyo inopenya indasitiri yewaini. Achiziva kukosha kwaAshley kune indasitiri yewaini inopenya, Magazini yeWine Enthusiast yakamutumidza zita rekuti The Champagne Queen uye yakamuisa sa40 pasi pe40 Tastemaker (2016).
Akazvarwa muHonolulu, Hawaii, Ashley akatanga basa rake rekushambadzira mufashoni neazvino Yemahombekombe uye Haute Magazini Anorarama. Muna 2010, akatamira kuNew York ndokutanga mwedzi wake wega wega, Sipped 'n Scene, rakaburitswa muTasting Panel uye Destinations Travel.
Pa Kukadzi 19, 2021, Ashley akabvunzurudzwa naDr Elinor Garely, on WorldTourismNetwork uko hurukuro yakanangana nezvekuti nei Champagne iri chaizvo izvo nyika yave kuda izvozvi.